1.1 Online editor tag id3
1.2 Free id3 editor tag
1.7 MP4 tag id3 editor
2.4 badalo "
Top 5 Online tag id3 tifaftirayaasha
Editor tag A (aka tagger) waa software ah in loo isticmaalaa in lagu saxaa metadata badbaadiyey qaabab sida ID3 ee files audio. Ujeedada ugu muhiimsan ee editor tag ah waa in aan kala shaandhayno oo ku kala soocaan macluumaad la gundhig gudaha files multimedia si uu ugu caddeeyo waxa ka fudud u isticmaala si aad u ogaatid tareenka, iyo si ay u guraan sida heshiisyada xisaabaadka shakhsi ahaaneed. Taggers online oo farabadan ayaa lagu heli karaa internet-ka si aad u badbaadiso ka kaaftoomi ee degsado iyo ku rakibidda software on your computer deegaanka.
Iyada oo internetka ah ID3 tag editor , waxaad gali kartaa file maqal ah oo aad arjiga ku internetka, iyo u isticmaalaan si ay u xaalkaa macluumaadka la xidhiidha galka, sida magaca farshaxanka, album, tirada track, horyaalka track, oo ku sifayn. Tani waxay kaa caawisaa in abaabulka maktabadda music aad si hufan oo aan haysan si ay u soo bixi codsiga tagger ah in ay gaari ku adag ee degaankaaga.
Ugu sareysa 5 tag tifaftirayaasha online yihiin:
5. MP3 Tag Editor Online
Waxaad isticmaali kartaa link la siiyo si ay u isticmaalaan internetka software: http://tagmp3.net/index.php
TagMP3.net kuu ogolaanayaa inaad geliyaan aad audio files arjiga free online in magaca iyo tags ID3 u saxaa. Isticmaalka codsigan online, waxaad ku dari kartaa ama wax ka beddelo image file MP3 ah, iyo edit macluumaadka kale ee la xiriira gundhig waxa ku jira. Star Rating: 4 out of 5 stars (celcelis ahaan user rating)
website waxay leedahay faa'iidooyin badan laga qabanin internetka kale ee bixiya sifooyinka isku, sida:
. • Waa saaxiibtinimo website user
• Waxaad gali kartaa file maqal ah in mar horeba la badbaadiyey on your computer, ama waxaad geli kartaa URL ee ah file maqal ah lagu kaydiyaa mid ka mid ah database-online.
• Codsiga internetka ayaa aad u saamaxaaya in ay ku darto oo aad ku sifayn u gaar ah iyo qaybaha.
• Aan lahayn bixinta badan tafatirka file. Taas ayaa ka dhigaysa waqtiga cunaysa habka ay dhacdo in aad leedahay files kala duwan si ay wax ka bedel ay.
• ma ogola ku daray lyrics in file MP3 ah.
Waxaad isticmaali kartaa link la siiyo si ay u isticmaalaan internetka software: http://newmaza.in/site_mp3_tag_editor.xhtml
Bogga internetka waxaa loo isticmaali karaa in wax ka bedel, magaca ama ka saarto warbixin wadajir waa in gundhig qaab ID3 gudaha files audio. Star Rating: 3 ka mid ah 5 stars (celcelis ahaan user rating)
. • aad bixisaa fursad u geliyaan ku files audio hore u kaydiyaa in your computer, ama in ay galaan URL ee files si ay u tags ID3 ay xaalkaa
• Kuu ogolaanayaa inaad bedesho image daboolka ka mid ah files audio.
• aad u ogolaanaya in ay dari URLs ee kuwan raadkaygay codka.
• Waxa uu bixiyaa dhamaan macluumaadka hab fudud daaqad kaliya.
• awood inaad doorato ka files audio laga heli karaa website laftiisa gudahood.
• aad bixisaa fursad u tags ID3 ka dhigo bilowga ama dhammaadka kuwan raadkaygay audio ah.
• Aan lahayn doorasho badan tagging.
Waxaad isticmaali kartaa link la siiyo si ay u isticmaalaan internetka software: http://mytune.in/site_tag.xhtml
website Waa wax fudud ah si ay u isticmaalaan codsiga online freeware u saamaxaya in aad xaalkaa metadata kaydiyaa qaab ID3 ee files audio. Waxay leedahay feature dheeraad ah oo taageera lookups database online, oo sidaas kuu ogolaanayaa inaad tags habboon iyo cover tahay ururiyaan ururinta music aad. Star Rating: 3 ka mid ah 5 stars (celcelis ahaan user rating)
. • Ma fududahay in la isticmaalo, sidaas darteed waxaa isticmaali kara arday iyo khubaro
• Ma u awood badan oo loo isticmaali karaa labada qof ahaaneed iyo xirfad tagging ID3.
• Miyuu design fudud oo nadiif ah.
• Ma codsiga aan dabranayn online freeware ah.
. • Waxay leedahay ikhtiyaar ma sixiddiisa badan files audio isku mar
• Ku darista lyrics si faylka maqal ah suurtogal ma aha.
Waxaad isticmaali kartaa link la siiyo si ay u isticmaalaan internetka software: http://www.bdrose24.com/site_mp3_tag_editor.xhtml
Codsiga internetka waxaa loo isticmaali karaa in tags ID3 ka xaalkaa gudahood file maqal ah oo loogu maaraynta habboon ee maktabadda music ah. Tani web app freeware sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u baadhaan sida aad doonayso inaad files audio ka database-badan oo online, iyo edit tags ID3 ay. Star Rating: 3.5 out of 5 stars (celcelis ahaan user rating)
. • Ma codsiga aan dabranayn web freeware ah
• Miyuu interface nadiif ah.
• Waxay bixisaa dhammaan fursadaha tafatirka daaqad kaliya.
• ma bixiso Dufcaddii tafatirka.
• Aan lahayn bixinta ee tags ee file maqal ah in lagu kaydiyaa drive your computer ee adag sixiddiisa, oo wuxuu kuu ogolaanayaa oo kaliya in aad xaalkaa files la uploaded ka database-online.
• weli ka yar horumarka joogtada ah, iyo kor yimaado la marmar qaladaad.
• Iyaga oo ku taageera ku daray kaliya daboolka ka mid album per file tahay.
Waxaad isticmaali kartaa link la siiyo si ay u isticmaalaan internetka software: http://www.watermark-images.com/mp3-tag-editor-online.aspx
Codsiga waxaa loo isticmaali karaa in lagu saxaa MP3 tag macluumaad joogo qaab ID3 oo aan haysan si ay u gashato kombiyuutarka. Barnaamijka wuxuu leeyahay aasaasiga ah beeraha tag sida horyaalka, album, fannaaniin, sifayn, copyright, iyo comments oo la saxar karaan sida la doonayo. Rating Star: 2.5 out of 5 stars (celcelis ahaan user rating)
. • Ma codsi freeware online oo loo isticmaali karaa jeer sida ugu badan ee loo baahan yahay iyada oo aan kharash kasta
• Ma fududahay in la isticmaalo iyo weli aalad awood in ID3 tags ee files audio online saxaa.
. • Miyuu tiro yar oo fursadaha tag tafatirka
• ma ma leeyahay beeraha sida tirada track iyo sanadkii sii daayo.
• Ma kuuma aan oggolaan inaad xaalkaa file maqal ah baadhi ka database-online ama gasho URLs ee faylka. Waxaad kaliya tags ID3 ee file MP3 ah in mar horeba la kaydiyaa your computer ka edit karaa.
• Miyuu huwada Dufcaddii tafatirka.
Fiiro gaar ah : ratings xiddiga waxay ku saleysan yihiin dadka isticmaala celcelis 'rating kuwaas oo loo isticmaalo, iyo arjiga dib loo eego si shakhsi ah. Shuruudaha asaasiga ah ee rating xiddiga ku jira seddex dhibcood muhiim ah:
• Haddii website-ka taageertaa tags aasaasiga ah, farshaxanka cover gundhig, iyo lyrics?
• Haddii codsiga online ayaa Rizqi goobidda file MP3 ah ka database-online sidoo kale uploading file ah waa in mar hore lagu kaydiyaa drive deegaanka adag ee kombiyuutarka users?
• Haddii aan website uu leeyahay bixinta si ay magaca files isticmaalaya macluumaadka tag ah.
Jidka Best in Download Music
Download MP3 Music? Talooyin Qaar ka mid aanad garanayn
Dhegayso Music on Spotify Linux markii aad doonto
> Resource > Music > Top 5 Online ID3 Tag Editors